कोरानोको त्रासबाट मुक्त हिमाली आदिवासी
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासबाट नेपालका हिमाली आदिवासीहरु मुक्त रहेको पाइएको छ । भौगोलिक अवस्थिति, वासास्थान र परम्पराअनुसार पेसा, व्यवसाय गर्ने भएकाले हिमाली आदिवासीमा कोरोना भाइरसको जोखिम अत्यन्त न्यून रहेको आदिवासी सम्बद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
“हिमाली आदिवासीहरुको बसोबास शहरी क्षेत्रबाट धेरै टाडा रहेको छ । यहाँ बाहिरका मानिसले कोरोना लिएर आउने संभावना कम छ ।” वालुङ सेवा समाजका अध्यक्ष सोनाम लामाले भने, “हिमाली आदिवासी वालुङहरु ताप्लेजुङको लेलेप, ओलाङचुङगोला र याम्फुदिन क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । कञ्चनजंघा हिमालको फेदीमा बस्ने हाम्रा वालुङहरुको अन्य समूदायसँग भेटघाट दुरुह हुन्छ ।फेरि अहिलको लकडाउनमा बाहिरका मानिस यहाँ आउन पनि प्रतिबन्ध गरिएको छ ।”
पूर्वको कञ्चनजंघादेखि पश्चिमको हिमालको हिमरोखामा ल्होमी, सियार, थामी, भोटे, डोल्पो, तोप्केगोला, फ्रि, मुगाल, लार्के, ल्होपा, वालुङ, छैरोतन, ताङ्वे, थकाली, शेपार्, जिरेल, ह्योल्मो लगायतका आदिवासीहरुको मूख्य बसोबास रहेको छ ।
आदिवासीको वर्गिकरण अनुसार हिमाली आदिवासीहरु अति सीमान्तीकृत समूदायमा पर्छन् । तथापी परम्परा, तथा आफनो संस्कृतिलाई भने बचाउन सफल भएका छन् । पशुपालन र कृषिलाई मूख्य पेसा बनाएका हिमाली आदिवासीहरुमा कोरोना भाइरसको संभावित जोखिमको हल्लाले खासै प्रभाव नपारेको सम्बन्धीत समूदायको भनाई छ ।
“हाम्रा समुदाय (भोटे समुदाय) का मानिसहरु भेडा, चौरी चराउन हिमालतिर लागेका छन् । चौरी तथा भेडीगोठमा हत्तपत्त बाहिरका मानिस पुग्न सक्दैनन् । यस कारण हिमाली आदिवासीमा कोरोना संक्रमणको संभावना थोरै छ ।” बाजुरामा मूख्य कार्यलय रहेको नेपाल भोटे जनजाति सेवा समितिका अध्यक्ष गम्भीर सिंह गुरुङले भने, “यतिबेला देश बिदेश घुमेर फर्केका आफना र अन्य बाहिरया मानिसलाई समुदायमा प्रबेश गर्ने अनुमति पनि छैन ।”
हिमाली आदिवासीका लागि तत्कालका लागि खाद्यन्न अभाव नहुने पनि उनीहरुको तर्क थियो । “हिमाली आदिवासीहरुमा खाद्यन्न सञ्चय गर्ने परम्परा छ । गत बर्षको हिउँदमा नै वर्षभरीका लागि पुग्ने खाद्यन्न उहाँहरुले सञ्चित गरिसक्नु भएको छ ।” भोटेजातिसंग सम्बन्धित जातीय संस्थाका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार यो परम्परा जिवित भएकाले अहिलेका लागि हिमाली आदिवासीमा खाद्यसंकट अहिलेका लागि छैन ।
वालुङ सेवा समाजका अध्यक्ष लामा पनि हालका लागि हिमाली आदिवासीमा खाद्य संकट नहुने भनाइमा सहमति छन् । “हिमाली आदिवासीहरु धान चामलमा निर्भर समुदाय होइन, हाम्रा पुर्खाले बन जंगल र भीर पाखामा उत्पादन हुने खानेकुरा खानका लागि हामीलाई सिकाएका छन् । हाम्रा समुदाय तत्कालका लागि त्यही खाएर बाच्छन् । शहर बजारमा जस्तो हरेक दिन खानेकुरा खोजेर हिड्नु पर्ने समस्या हिमाली आदिवासीमा छैन ।”
बसाई सरेर शहर वा सुगम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हिमाली आदिवासीमा भने खाद्यन्न लगायतका बिषयमा समस्या रहेको उनीहरुको टिप्पणी छ । आफ्नै थातथलोमा बस्नेका लागि कुनै समस्या नभएपनि शहर बजारमा बसाई सर्नेका लगि समस्या हुन सक्ने सियार समाज कल्याण केन्द्रका अध्यक्ष निमा लामाको अनुमान छ । “सियारहरु गोर्खाको उत्तरी भेग चुम उपत्यकामा बसोबास गर्छन् । त्यहाँ हालका लागि खाद्यन्नको कुनै समस्या छैन ।” लामाले भने, “हिमालमा पाइने जडिबुटी हिमाली आदिवासीको तागतिलो खाना हो ।”
नेपालको मानवअधिकारप्रति मीनाक्षीको चासो
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिनेमध्ये एक भारतीय अधिकारकर्मी अग्र पंक्तिमा थिइन् । उनले ज्यादतीमा संलग्न सरकारी तथा सुरक्षा अधिकारीको चर्को विरोध मात्र गरिनन्, तत्कालीन माओवादीका चरम हिंसात्मक गतिविधिलाई समेत उदाङ्गो पारिन् । पीडकलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने हेतलेु उनी प्रयासरत छिन् । उनी हुन् ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक मीनाक्षी गांगुली । उनी भारतमा रहेर नेपाललाई अत्यन्त सुक्ष्म र निकट रुपमा बुझेकी अधिकारकर्मी हुन् । उनी आवद्ध संस्था ह्युमन राइट्स वाचले विश्वका करिव १०० देशमा मानवअधिकार हनन्का घटनाको अनुसन्धान गर्छ ।
हाल विश्वव्यापी महामारीका रुपमा कोरोना भाइरस फैलिएको सन्दर्भमा नेपालमा आम नागरिकको मानव अधिकारको रक्षाका लागि उनले निरन्तर खबरदारी गरिरहेकी छिन् । हालै उनले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन भन्दै नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन् गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् । उनीद्वारा जारी वक्तव्यमा भारत, खाडी देशहरू र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाले पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नहुँदा नेपालले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन खासै पहल नगरेको आरोप लगाइएको थियो ।
नेपालमा लकडाउनको अवस्था भएसँगै विदेशमा काम गरिरहेका तर रोजगारी गुमाएका नेपाली अलपत्र परेको भन्दै उनले नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी घर फर्कनबाट प्रतिबन्ध लगाइनुले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघन भएको बताएकी थिइन् । साथै भारतीय भूमिमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई भारत सरकारले सहयोग गर्न लागेको भन्दै स्वागत पनि गरेकी थिइन् । नेपालप्रतिको उनको प्रेम उनका वक्तव्यमा प्रतिबिम्वित हुन्छन् । गांगुलीले न्याय, गरिमा, करुणा र समानतको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छिन् । उनले विगतमा नेपालस्थित भुटानी शरणर्थीको हक हितका बारेमा पनि अनुसन्धान गरेकी थिइन् ।
नेपालले मानव अधिकारको बाटो छाड्नु हुँदैन भन्ने उनको विचार छ । नेपालमा राज्य पक्षबाट पत्रकारमाथि अनलाइन ठगि रोकथामका लागि तर्जुमा गरिएको विद्युतीय कारोबार ऐनको भाग ४७ को दुरुपयोग गरेर ज्यादती गर्ने गरेकोमा उनको आपत्ति छ । सरकारले विश्वसनीयता र विधिको शासनलाई नियतपूर्वक कटौती गरेको र दण्डहीनतालाई बढावा दिइरहेको उनको ठम्याई छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा जोडदार आवाज उठाउने गांगुलीले धार्मिक तथा जातीय विभेद र यौन हिंसा विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएकी छिन् । महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका विषयमा उनले विशेष पैरवी गर्दै आएकी छिन् । भारतमा उनले गुजरातको साम्प्रदायिक दंगा, पञ्जावमा न्यायको अभाव, माओवादी प्रभावित सर्वसाधारण लगायतका विषयमा चासो राखेकी थिइन् । जम्मु, कश्मिर र मणिपुर क्षेत्रमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उनको चासो थियो । उनले माओवादी संघर्षबाट प्रभावित व्यक्तिसहित भारतका कमजोर समुदायको सुरक्षा विफलता तथा मणिपुर एवं जम्मू र काश्मीरमा संघर्षसँग जोडिएका उत्पीडनमाथि शोध गरेकी छिन् । भारतको विदेश नीतिमा मानव अधिकार दृष्टिकोणको वकालत पनि गांगुलीले गरेकी छिन् । श्रीलंकामा युद्धको समाप्ति पश्चात् उनले श्रीलंकाली सेना र तमिल टाइगर्सका सदस्यलाई मानव अधिकारको हनन्मा जिम्मेवार ठहर्‍याइन् ।
भुटानमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकमाथि गरिने भेदभावका विषयमा उनले अनुसन्धान गरेकी छिन् । उनले बंग्लादेशमा मानव अधिकार उल्लंघनको दस्तावेजीकरण पनि गरेकी छिन् । श्रम अधिकारको उचित संरक्षणमा जोड दिने गांगुलीले सशस्त्र संघर्षका दौरान बालबालिकाको सुरक्षा, एचआईभी एड्स संक्रमित व्यक्तिमाथि हुने भेदभाव, समलैंगिक पुरुषको अधिकार जस्ता मुद्दामा काम गरेकी छिन् । उनका लेख रचना विभिन्न समाचार पत्र, वेबसाइट र पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित छन् ।
अत्यन्त सरल, सहज र मृदुभाषी गांगुलीले भारतको दिल्ली स्कुल अफ् इकोनोमिक्सबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेकी छिन् । सन् २०१० मा ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक पदमा नियुक्त हुनुअघि उनी सोही संस्थाको दक्षिण एसिया अनुसन्धाकर्ताका रुपमा कार्यरत थिइन् । ह्युमन राइट्स वाचमा आबद्ध हुनुअघि उनले टाइम म्यागेजिनमा दक्षिण एशिया संवाददाताको रुपमा कार्य गरेकी थिइन् । त्यसबेला उनको कार्य क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश र श्रीलंका थियो ।
कोभिड-१९, मुस्लिम आयोग र मस्जिद मदरसा अनुगमन
-रहम तुल्ला मियाँ
कोभिड-१९ को संक्रमणले विश्व आक्रान्त छ । यो बढ्दो क्रममा छ । आपसी मतमतान्तरलाई थाती राख्दै ब्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा यसकोविरुद्धमा लाग्न जरुरी छ । केही सुझबुझको कमि र केहि स्वार्थी पत्रकारको कारणबाट कोरोना र तब्लिगी जमाअतको सन्दर्भमा केही अफवाह र भ्रम सृजना गरे गराइए पनि यसले सामान्य रुपधारण गरिसकेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६४ ले नेपालमा मुस्लिम समुदायको ईतिहास, संस्कृतिको पहिचान, हकहित संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशक्तीकरणको लागि संवैधानिक मुस्लिम आयोगको ब्यवस्था गरेको छ, जुन सुखद कुरा हो । मुस्लीम आयोग ऐन २०७४ ( संसोधन ऐन २०७५ ) ले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार पनि स्पष्ट गरिसकेको छ । आयोगले पूर्णता नपाउनु द:खद् पक्ष त छँदैछ तर आयोग आफ्नो काम कर्तब्य प्रति अलमलमा वा दिशाहिन वा राजनैतिक छाया वा कुन कारणले हो, गति लिन नसकेर सानातिना कुराहरुमा अलमलिइ रहेको भान हुन्छ ।
मुस्लिमहरुको समग्र स्थितिको अध्ययन गरि उनीहरुको हकहित संरक्षण, सम्बर्द्धन र सशक्तीकरणको लागि नीतिगत र कानुनी सस्थागत सुधारका बिषयमा आवश्यक नीति, योजना तर्जुमा र प्रभावकारी कार्वान्वयनका लागि सरकारलाइ सुझाब र सिफारिस गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव र सिफारिस बमोजिम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने तथा मुस्लिम समुदायको अधिकार उल्लंघन गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाबिरुद्द उजुरी संकलन गरि सो उपर छानवीन वा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने आदि काम , कर्तव्य र अधिकार पाएको मुस्लिम आयोग आफ्नो काम प्रति सचेत छ ? छ भने मुस्लिम हकहितको लागि कतिवटा कुन कुन योजना, कार्यक्रम र सशक्तीकरणको नीतिगत कानुनी, सस्थागत सुधार, हकहित, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सुझाब र सिफारिस सरकार समक्ष पेश गर्‍यो ? पेश गरेका सुझाब र सिफारिसको कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा, अनुगमन र मुल्यांकनको फेहरिस्ता नेपाली मुस्लिम समुदायलाई दिन सक्छ ? सक्दैनभने आफ्नो उपस्थिति देखाउनकै लागि एउटा जल्सा, कन्फ्रेन्स, इज्तेमामा प्रस्तुत भएर फोटो खिचाउदैमा आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्दछ भने उसप्रति भन्नू केही छैन । आयोगबाट भइरहेको मस्जिद मदरसाको अनुगमनले पनि केही प्रश्न उब्जाएको छ ।
के आयोगले मस्जिद मदरसाका सन्दर्भमा कुनै नीति , कार्यक्रम, योजना सरकारसमक्ष पेश गरेको थियो ? त्यो नीति , योजना , कार्यक्रम सरकारबाट लागु गराइ कार्यान्वयनको अवस्थामा थियो ? र , त्यस्को अनुगमन गर्नका लागि खटाइएको हो ? होइन भने आफ्नो भूमिका शून्य भएको ठाउँमा के को अनुगमन ?
मस्जिद मदरसामा कोरोना संक्रमित लुकाएर राखिन्छ , लकडाउनको पालना हुदैन र समितिहरु केही जान्दैनन् भन्ने मान्यतामा अनुगमन गर्न खोजिएको हो ? होइन भने आयोगले सरकारलाई हाम्रा मस्जिद बिशुद्ध प्रार्थना गर्ने ठाउँ हो , यहाँ एक/दुई धर्मगुरु, एक मुवज्जिन, अन्य एक/दुई कामदार हुन्छन् , मदरसा इस्लामी शिक्षा दिने ठाउँ हो र अहिले नेपालका सबै मदरसा लकडाउन संगै बन्द छन् भनेर सम्बन्धित निकायहरुलाई किन बुझाउन सकेन ? यहाँ कुनै पनि अवाञ्छित क्रियाकलाप हुदैनन, हामीले प्रत्येक मस्जिद मदरसा समितिहरुलाई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न टी ओ आरसमेत दिएका छौ, मस्जिदमा उल्लेखित ४/५ जना बाहेक अरु भिडभाड नगर्न, घरमा नमाज पढ्न धर्मगुरुहरुबाट आदेश लिइ निर्देशन गरेका छौं भनेर किन समयमै स्पष्ट गर्न सकेन ? वास्तवमा धार्मिक कुराहरुमा आदेश गर्ने आयोगको अधिकार छैन ,धर्मगुरुहरुको हवाला दिनुपर्छ भन्ने यस पङ्तिकारको बुझाइ हो । आयोगले हाम्रा समितिहरु सक्षम छन , आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकार तथा प्रशासनसंग समन्वय गर्न भनेका छौं भन्ने अडान लिन सक्नु पर्थ्यो ।
यति ठूलो हैसियत भएको संबैधानिक आयोग आफै यी सदियौ देखि दु:ख गरेर, घरघर, बस्तिबस्ती, देशबिदेश घुमेर इस्लामी आर्थिक ब्यवस्था अनुसारका जकात, सद्का तथा अन्य मनकारीहरुको सहयोग संकलन गरि सन्चालन भएका मदरसा र बिशुद्ध नमाज पढ्नेमात्र कामको लागि बिशुद्ध धनबाट चन्दा लिइ बनाइएका मस्जिदहरुको समितिहरुको बिश्वास नभएको र मस्जिद मदरसा मानिस (मुसलमान, मुसलमानले मुसलमानलाई) लुकेका/लुकाइएका, लकडाउनको उल्लंघन गरेको आशंका उब्जिने, मस्जिद मदरसा समितिलाई कमजोर बनाइ गलत सन्देश जाने किसिमले अनुगमनको नाममा कतिपय त मस्जिद मदरसालेसमेत नचिनेका बिशुद्ध राजनैतिक कार्यकर्तालाई लुरुलुरु हिडाएर, मस्जिद मदरसामा डुलाएर आफ्नो उपस्थिति देखाउने माध्यम बनाउनु अघि आयोगले राम्रो सोचबिचार गर्नु पर्दथ्यो ।
कथमकदाचित सूचनाको कमि, अज्ञानता र सुझबुझ अभावको कारणले कोहि कतै अल्झिएर बसेको पाइएको भए वा पाइएमा आयोगका लागि त्यो अभिषाप हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसतर्फ आयोग सचेत छ ? यसरी एक्कासी कुनै योजना, नीति, कार्यक्रमबिनाको अनुगमन गर्न संबैधानिक आयोगले ब्यक्तिहरुलाई खटाउछ र खटिने आफ्नो इज्जत र सान बढेको महसुस गरि आज अनुगमन गर्दा यो पाइयो र त्यो पाइयो लकडाउनको पालना गर्न सिकाइयो भनेर फोटो खिचाउँदै हिँड्ने र अनुगमनमा नपरेका र हिड्न नपाउनेले अब मेरो जिन्दगीको यात्रा नै सकियो भनेर अत्तालिएका हर्कतहरु प्रदर्शन गर्छौ भने नेपाली मुसलमानहरुले ब्यक्तिगत र सस्थागत रुपमा आफ्नो अवस्था र हैसियतको राम्रो विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक मियॉ नेपाल मुस्लिम संघ राष्ट्रिय समिति सचिव हुन् ।)
-योगेश्वर रोमखामी मगर
१९६० को दशकमा नेपाल र दक्षिण कोरियाका नागरिकको प्रति व्यक्ति आय बराबर थियो । अहिले दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय २५ हजार डलरमाथि पुगिसकेको छ भने हामी नेपालीको अवस्था कस्तो छ आत्म मूल्यांकन गर्नु पर्ने समय हो यो । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो भएन भने राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मान अभिवृधि हुन सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलम्बी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडा व्यहोर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रम केलाउँदा थाहा हुन्छ । अर्थात कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाम मात्रको सार्वभौम सम्पन्न हुन्छ । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनताको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
विगत तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक हुँदै गएको थियो । केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाडी सारिएको थियो, तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा कोरोना महामारीले नकारात्मक असर पर्न सक्ने संभावना देखिएको छ । बलियो, स्थिर सरकार र दुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यो महामारीको अवस्थामा देशको राजनीति सत्ता खेलमा केन्द्रीत हुनु अत्यन्त लज्जास्पद महसुस गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सम्पन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुन् । मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरी पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने जनमानसमा चिन्ता व्याप्त रहेको छ । यसर्थ देशको आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभावबारे केहि चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक सम्पन्नताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हास्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापी सकिन्न भन्ने लेखकको मान्यता रहिआएको छ ।
विगत दुई दशकदेखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि उर्जा विद्युत् र ठूला ठूला परियोजनाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगती भएको देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्ष यता आर्थिक वृद्धि दर औसत ७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना थियो । आर्थिक विचारकहरुले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यसको तीन वटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडेलको रुपमा लिने गरेका छन् । यसअन्तर्गत प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्भिस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ । तेस्रो सेवा क्षेत्र अन्तर्गत चिकित्सा सेवा, अस्पताल, निर्माण, सरकार र निजि क्षेत्रबाट पुर्‍याइने सेवाहरु होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सूचना, सञ्चार र मानव शंसोधन इत्यादी पर्ने गर्दछ । तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको हुन्छ । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यस अन्तर्गत आउँछ ।
२०१८ को आंकडाअनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कूल जीडीपी मा २५.२९५, औधोगिक क्षेत्रको १३.४५५ र सर्भिस सेक्टरको ५१.३९५ थियो । आर्थिक वर्ष २०१८ र १९ अनुसार चीनलगायत दक्षिण एशियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३५ र बंगलादेश ७.३५ पछि ६.५५ सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो भने पाकिस्तान २.९५ र अफगानिस्तान ३.०५ सहित सबै भन्दा तल्लो स्थानमा थिए । दुवै राष्ट्रहरुको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार मात्र यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । २०१९ अनुसार कूल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपाल भन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठूलो छ । विगतदेखि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई बेवास्ता गरिएका कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीका लागि झन्झटिलो र अमैत्रिय सरकारी वातावरण र गैरजिम्मेदार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्त मात्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चीनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । चार पाँच दशकभित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरुमा चीनबाट उत्पादित सामान पुग्दछ । यी राष्ट्रहरुको घर–घरमा आज चीन पुगेको छ ।
हामीले वर्षौंदेखिको कृतिम लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालीन उर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय काम र समर्थन स्वरूप भ्रष्ट अपराधीहरुको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकारबाट नेपालले मुक्ति पाएको हो । जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालले धेरै पछिसम्म आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै न्यून मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो तर विगत केहि वर्षयता यसमा आशालाग्दो ढंगले वृद्धि भएको छ । २०१६ यता विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि दर तिीव्र रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०१८ र १९ को मध्य मार्चसम्म यसको उत्पादन लक्ष्य १ हजार १४२ मेगावाट पुर्‍याउने सरकारी अठोठ अनुसार प्रगती देखियो । नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, ह्वा, फोहर मैलाबाट उत्पादित उर्जा पर्दछ ।
यसका अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माण पनि राम्रै गतिमा भइरहेको छ । औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन् र यस अनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विद्युत्को माग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ । यद्यपी विद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजारसम्म छ भनिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजना अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र ९.६.५ को दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजनाअन्तर्गत २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु, १७७ वटा अत्यन्त प्राथमिकताका आयोजनाहरु छन् । साथै आगामी पाँच वर्ष भित्रमा १५९५ अमेरिकन डलर प्रति व्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य समेत यस योजना अनुसार देखिन्छ । ठूला परिवर्तनकारी आयोजनाहरुको लागि जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लगायत १८ वटा आयोजनाहरुमा सरकारले हात हालेको छ, निरन्तर दिएको छ । एशियन विकास बैंकले गरेको सहयोग अनुरुप विगतमा सरकारी अक्षमताले ऋण रकमको अपेक्षा अनुरुप प्रयोग हुन् सकेको छैन । कोरोना महामारीले आर्थिक वृद्धिलाई अवरोध गर्ने निश्चित छ ।
नेपालको जीडीपीमा सर्भिस सेक्टरबाट ५७५ को योग्दान पुर्‍याउने लक्ष्य अपेक्षित थियो । मध्य पूर्वको खाडी मुलुक र दक्षिण पूर्वीय एशियामा कार्यरत नेपालीहरुले पठाएको विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सले ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्मको योगदान जीडीपीलाई गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो स्रोत हो रेमिट्यान्स । २०१८ को तथ्यांक अनुसार ८.१ अर्ब अमेरिकन डलर विदेशमा काम गर्ने कामदारहरु मार्फत नेपालले पाएको थियो । रेमिटेन्स आर्जन गर्ने राष्ट्रहरुमा नेपाल १९औ नंबरमा रहेको छ । मध्य पूर्व र दक्षिण पूर्वको १४ वटा राष्ट्रहरुमा नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत छन् । अन्य राष्ट्रहरुमा समेत हालको महामारीले गर्दा कल–कारखाना र अन्य काम बन्द भएको अवस्थामा बेतलबीहरुको संख्यामा भारी बढोत्तरी हुनेछ । बेरोजगारीका कारण उनीहरु फर्किने क्रम सुरु भइसकेको छ । वातावरण पुनः सामान्य हुन् वर्ष दिन लाग्न सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । नेपालको प्रत्येक गाउँबाट नेपालीहरु विदेशिएका छन् र यसबाट प्राप्त आम्दानीले घर गृहस्थी चलेको छ । नेपालको गरिबी उन्मुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ । नियमित रुपमा चलिरहेको घर गृहस्थीलाई महामारीले धक्का दिने छ । बैंकबाट लिएको कर्जा चुकाउनका लागि विदेशमा डबल शिफ्टमा काम गर्न बाध्य मानिसहरु फर्किने छन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार दैनिकरुपमा १५ सय नेपाली युवाहरुको समूह विदेसिने गरेका थिए । अन्दाजी ४५ लाखको संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा आय आर्जन गर्ने काममा छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द छन् । उडान सुरु हुने वित्तिकै भारी संख्यामा देश भित्रिने क्रम सुरु हुने छ । सरकारद्वारा घोषित पर्यटन वर्ष २०२० महामारीले गर्दा सफल हुन् सकेन, स्थगित गर्ने घोषणा भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको उपचार निम्ति भ्याक्सिनको सफल प्रयोग हुन अझ छिट्टोमा एक वर्ष वा त्यसभन्दा बढी लाग्न सक्छ । तबसम्म पर्यटन आगमन पक्का पनि हुने छैन वा आशालाग्दो हुने छैन । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन र यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु होटल, रेष्टुरेन्ट, पदयात्रा, हिमाल आरोहण इत्यादीले ठूलो मात्रामा रोजगार दिएको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ । नेपालले यसबाट बेग्लै पहिचान बनाएको छ । ठूलो संख्यामा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हुने हिन्दु र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रका पर्यटन र यससँग संबन्धित रोजगारका क्षेत्रमा समेत अप्रत्याशितरुपमा असर परेको छ ।
राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एकै उद्देश्य बनाएर एकजुट हुनु पर्ने हो । यस्तो समयमा पनि सत्तारुढ पार्टीभित्र राजनितिक उठापटक भएको देख्नु र सुन्नु उदेक लाग्दो विषय हो । विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागभण्डा नमिलेको कारण लक्षित समुदायले आवश्यक सहयोग नपाएको समाचार आजको मितिसम्म पनि सुन्नमा आएको छ । महामारीको समयमा ढिला सुस्ती गर्नु, निष्पक्षताका साथ कार्य सम्पादन नगर्नेहरु राष्ट्रघाती हुन् । यिनीहरुलगायत भरतपुर अस्पतालका सामाग्री चोरहरुलाई विप्लवले भाटे कारवाही गर्नु भन्दा पैला सम्बन्धित निकायबाट राम्रो सन्देश जानेगरी कानुनी कारवाही गरिनु पर्छ । सरकारी प्रयासबाट राम्रा कामहरु भएका छैनन् म भन्न चाहन्न, भएका पनि छन् । तर तुलनात्मक रुपमा अप्रिय क्रियाकलापको फेहरिस्त धेरै लामो छ । सरकारले संकटको यो बेला बकबक गर्नु भन्दा राम्रो काम हेर्न जनता आतुर छन् ।
(मगर नेपाल प्रहरीको अवकाश प्राप्त एसएसपी हुन् ।)
कोरोनाको महामारीमा मिडियाको भूमिका
कोरोना भाइरस अर्थात् नयाँ भाइरस । यो भाइरसको विषयमा यसअघि कसैलाई पनि थाहा थिएन । सन् २०१९ डिसेम्बर अन्त्यमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस इटाली हुँदै युरोपभर महामारीको रुपमा फैलियो । संसारभर लाखौं मानिसको ज्यान लियो । संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेर गएको छ । यदाकदा कोरोना भाइरस मानवजातिको लागि तेस्रो विश्वयुद्ध सरह भएको समेत भन्ने गरिएको छ । हाल यस भाइरसको औषधी अर्थात् एन्टी डोट पत्ता लागिनसकेकाले यसको नियन्त्रण कहिले र कसरी होला ? संसार नै अन्यौलमा छ । यो भाइरसको फैलावट रोक्न मानिस मानिसबीच हुने सम्पर्क रोक्नु र हिडडुललाई नियन्त्रण गर्नु मुख्य उपायको रुपमा लिइएको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्व नै थिलथिलो भएको छ । त्यसैले संसारका सबैजसो देशहरुले लकडाउन घोषणा गरी सेल्फ क्वारेन्टाइन अर्थात् एकान्त बासमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरेका छन् ।
नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो छैन । पहिलो पटक २०७६ माघ १० गते चीनको वुहान क्षेत्रमा पढ्न गएका एक नेपाली विद्यार्थीमा उक्त भाइरसको संक्रमण भेटिएको थियो । सुखद पक्ष, नेपालमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म कसैको मृत्यु भएको छैन । तापनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर अर्थतन्त्र, नाजुक स्वास्थ्य सेवा र कोरोनाको महामारीबाट देशलाई जोगाउने रणनीति र स्रोत साधनहरुको अभाव छ । त्यसमाथि सत्तासीन दलभित्र भर्खरै देखा परेको राजनीतिक खिचातानीले अबको महामारीको फैलावट र त्यसको प्रभावबाट कसरी बच्न र बचाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता आम मानिसहरुमा बढेको छ ।
संक्रमित व्यक्तिबाट आफ्ना परिवार र साथीभाइहरुमा सर्न नदिन अरु व्यक्तिहरुसँग टाढै रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने र व्यक्तिगत भौतिक दुरी कायम राखिएको छ । तर त्यत्तिले मात्रै यो महामारी पूर्णरुपमा रोकथाम हुन गाह्रो छ । यस्तो विषम अवस्थामा आ–आफ्ना साधनस्रोत, जनशक्ति र क्षमताअनुसार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणबारे समाचार र विचारहरु प्रसारण गरिराखेका छन् । जनचेतना फैलाइराखेका छन् । यस्तो काम गर्नु सञ्चारमाध्यमहरुको प्रमुख दायित्व हो । त्यही दायित्व बहन गरिरहेका छन् ।
देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा सञ्चार माध्यमको भूमिका निर्भर हुने गर्दछ । सरकार र समुदायबीचमा सञ्चार कायम गर्न सञ्चार माध्यमले पुलको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । यस्तो भूमिका यस्तै प्राकृतिक प्रकोपका वेला अरु महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको बखत सञ्चारमाध्यमको सक्रियता यसैको प्रमाण हो । सञ्चारमाध्यमहरुले यस्तो बेलामा समाजलाई सचेत बनाउने, जागरण ल्याउने र शिक्षा दिने बिषयमा पनि सूचना प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् ।
कोरोना भाइरसको प्रकोपको नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक लगायतबाट क्रण लिएर भएपनि कोरोना कोष खडा गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरुको जोहो गर्न लागि परिरहेको छ । त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यहि समयलाई मौकाको रुपमा लिएर फाइदा उठाउने सरकारी र व्यापारी बिचौलियाहरुको खबरदारीसँगै कोरोना भाइरस सम्बन्धी आवश्यक जानकारी आ–आफ्नो साधनस्रोत अनुसार समाजलाई पस्कने भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । यस्को अलवा खाद्यान्न, पिउने पानी, खाना पकाउने ग्यास, औषधीको अभावजस्ता नागरिकलाई परेको समस्या र समाधानका उपायहरुको विषयमा पनि सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गरिरहेका छन् । इन्टरनेटको साथै मुलधारका सञ्चारमाध्यमको पहुँच नभएको गाउँहरुमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका अहम छ । ग्रामिण क्षेत्रलाई लक्षित गरी सञ्चालित समुदायको नाममा सञ्चालित केही रेडियोहरुले मातृ भाषामा सूचना प्रावाह गर्दै आएका छन्, तर कति रेडियोले यो जिम्म्ेवारी पूरा गरे वा गर्न बाँकी छ ? त्यो भने अध्ययनको विषय हो । तथापी कतिपय आदिवासी जनजातिहरुको भने उनीहरुले बोल्ने र बुझ्ने भाषामा रेडियो र टेलिभिजनमा जानकारीहरु उपलब्ध नभएको गुनासो छ ।
मातृ भाषामा सूचना प्रवाहका अभ्यास
कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा मातृ भाषामा सूचना प्रवाह महत्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, २०४८, विषेशगरी धारा १९ मा, मातृभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २००७ मे १६ मा संकल्प प्रस्ताव पास गर्दै सदस्य राष्ट्रहरुलाई आफ्नो देशभित्र बोलिने सबै भाषाहरुलाई संरक्षण र संवद्धन गर्न आह्वान गरेको थियो । आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ को धारा १६ मा मातृ भाषामा सूचना पाउने र मातृ भाषामा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाउने आदिवासीको अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । र नेपालको संविधानले पनि सबै जनालाई आफूले बोल्ने र बुझ्ने भाषामा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी र सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । कतिपय अवस्थामा औपचारिक नेपाली भाषामा मात्र सूचना प्रसारित हुँदा मातृ भाषा मात्र बोल्ने र बुझनेहरु माहामारी सम्बन्धी दिएको जानकारी र सूचना महत्वहिन हुन्छन् । उदाहरणको लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको सुरुको केहीदिनमा काठमाडौ महानगरपालिकाका अधिकारीहरुले घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै नेपाली भाषामा माइकिङ गरेपनि पसलहरु खुल्ला रहे, सडक, गल्ली, चोक र बडाहरुमा बुढापाका र बालबालिकासहित सबैजना सधैं झै निस्केर गफिन्थे । जब काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नेपाल भाषामा कोरोना भाइरस कसरी जोगिने भन्ने सन्देश दिनुभयो र लगत्तै वडा कार्यालयहरुले टोलटोलमा नेपाल भाषामै माइकबाट सूचना प्रवाह गरे । त्यसलगत्तै सडक र चोकहरुमा भेटघाट गर्ने कार्य ठप्प भयो । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि गुरुङ भाषीहरुका लागि भन्दै सचेतना सन्देश गुरुङ भाषामै दिनुभयो । त्यसैगरी खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा सञ्चालित खुन्दे अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर कामी तेम्बा शेर्पाले कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायका बारेमा शेर्पा भाषामा जानकारी दिनुभयो । यी प्रसंगहरु मातृ भाषामा सूचना प्रभावकारी मात्र होइन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सिकाई र कार्यान्यवनका केही उदाहरणहरु मात्र हुन ।
महामारी सुरुभएसँगै आदिवासीका संघ संस्थाहरुले आ–आफनो भाषामा कारोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयाससँगै आदिवासीहरुले सञ्चालन गरेका सामुदायिक रेडियो र टेलिभिजनहरुले मात्र होइन, सरकारी र निजी मिडिया, सरकारी तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत मातृ भाषामा सन्देश निर्माण गर्ने र प्रशारण गर्ने केही प्रयासहरु भएको देखिन्छ ।
हुन त, नेपालमा नेपाली भाषामै पनि सूचना प्रवाह गर्दा अंग्रेजी शब्दवालीहरु जस्तै लकडाउन, सेल्फ क्वारेन्टाइन, सेल्फ आइसोलेसन जस्ता शब्दवालीहरु प्रयोग हुँदा कतिपय नेपाली भाषीहरु समेत अलमलमा परे । गैर नेपाली मातृ भाषी समुदायहरु थप रणभुल्लमा परे । नेपालका पहाडी इलाकामा बसोबास गर्ने, सडक र सिमाना जोडिएका र बाहिरिया मानिसहरुसँग सम्पर्क नभएका र खेती किसानीमा रमाउने आदिवासीहरुलाई कोरोना भाइरसको चिन्ता नभएपनि भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरुमा भने भाइरसको त्रास फैलिएको मात्र होइन सरकारले घोषण गरेको लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव बढेको समाचारहरु आएका छन् । बेरोजगार, दैनिक ज्यालादारी गरी गुजारा गर्ने अधिक संख्यामा आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् ।
अधिकांंश अदिवासी जनजातिहरु ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएको कारण स्वास्थ सेवाको मात्र होइन सूचना र शिक्षाबाट समेत बञ्चित छन् । त्यसकारण भाषागत विविधता भएको देशमा, महामारीको बेला केही न केही योगदान दिउँ भन्नकै लागि भएपनि विभिन्न मातृभाषी समुदायहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न मातृ भाषामा कोरोना भाइरस सम्बन्धी सामाजिक सन्देश उत्पादन र प्रसारण गर्ने यस्ता प्रयासहरु महत्वपूर्ण छन् । प्रसांगिक र प्रशंसनीय पनि छन् ।
संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्ने चुनौती
गत डिसेम्बरमा चाइनाको वुहान सहरबाट सुरु भई विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वलाई सन्त्रास गराएको छ । यसको फैलिने क्रम जारी छ भने यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने, कति जनसंख्या प्रभावित हुने, कतिले ज्यान गुमाउनुपर्ने, रोग नियन्त्रणका लागि स्थायी उपचार विधि कहिले पत्ता लाग्ने कुनै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल राख्ने विकसित पश्चिमी मुलुकहरूले समेत अहिले लकडाउनको सामना बेहोर्नुपरेको छ र हालसम्म यस रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामको उपयुक्त समाधान विश्वव्यापी रूपमा नै लकडाउन देखिएको छ । हालसम्म यसको स्थायी उपचारको विधि आविष्कार हुन सकेको छैन, यद्यपि विकसित मुलुकहरू यस रोगको रोकथामका लागि भ्याक्सिन (खोप) तयार गरी परीक्षण गर्न लागिपरेका छन् भने कतिपय मुलुकले परीक्षणसमेत गरीसकेका छन्, तथापि यसको प्रभावकारी परीक्षण हालसम्म भएको अवस्था छैन । जुन देशबाट यस रोगलाई समाप्त गर्न सक्ने खोपको आविष्कार हुन्छ त्यो राष्ट्रले अबको विश्व अर्थतन्त्रको अगुवाई गर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा सन्त्रास फैलाएको यस भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत मन्दीमा धकेलेको छ । सन् २०२० का लागि यो महामारी विश्वव्यापी वित्तीय संकटभन्दा खराब हुने संकेत गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रले अपनाएका विविध रोकथामका उपायहरूका बाबजुद पनि नयाँ संक्रमणको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भएसँगै सबै मुलुकमा आर्थिक क्षति आरोहण हुँदै गएको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा समेत बाधा पुर्‍याइरहेको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू बन्द भएसँगै विश्वव्यापी रूपमा बेरोजगारीको समस्या उक्सिदै गएको छ । यस महामारीको असर विश्वव्यापी रूपमा कम्तीमा थप ६ महिनासम्म देखिने पूर्वानुमान गरिएको छ । मानिसहरूको आवागमनमा प्रतिबन्धको अवधि, विकसित तथा प्रमुख राष्ट्रहरूको आर्थिक गतिविधिहरू र उक्त राष्ट्रहरूको वित्तीय प्रोत्साहन प्याकेजको आकार तथा प्रभावकारिता, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको खर्चले अबको विश्व अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्छ ।
कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत अन्य देशहरूसँग परनिर्भर रहेको नेपाल समेत यो महामारीको सिकार बनेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट अत्यन्त प्रभावित भएको नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षहरूमा सुधार हुँदै आएको थियो । आ.व. २०७६÷७७ को बजेट र मौद्रिक नीतिअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिए तापनि कोराना महामारीको कारणबाट विश्व बैंकको सन् २०२० अप्रिलमा प्रकाशित गरेको आर्थिक तथ्यांकअनुसार उक्त वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा समेटिने अनुमान गरेको छ । महामारीको संक्रमण सावधानीपूर्वक नियन्त्रण नगरिएमा उक्त वृद्धिदर अझै कम हुन सक्ने निश्चितप्रायः छ । अर्थतन्त्रका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरू ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा महामारीको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ र उक्त क्षेत्रहरूको वृद्धिदर अझ न्यून हुने आकलनसमेत गरिएको छ । साथै, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा समेत यस महामारीको अधिकतम असर भएको देखिन्छ । अहिले महामारीलाई नियन्त्रण गरी मानिसको जीवन बचाउने मात्र नभई हाम्रो समाजलाई आर्थिक विपद्बाट बचाउन, दिगो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न साथै वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागिसमेत राज्यले साहसिक नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गरी नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असरको द्रुत गतिमा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिने अल्पकालीन समस्याहरू जस्तै उपभोगमा कमी हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु, बेरोजगारी बढ्नु, गरिबीको सख्ंया बढ्नु, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुनु, साथै राहतका नाममा भ्रष्टाचार मौलाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा धेरै समस्या परेको देखिन्छ, मूलतःण् पर्यटन वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले लगानीको प्रतिफल प्राप्ति नहँुदै महामारीको सामना गर्नुपरेकाले बैंकको ब्याज र किस्ता जम्मा गर्न कठिन देखिएको छ । साथै उद्योग, सेवा, यातायात र कृषिक्षेत्रसमेत महामारीको असरबाट अछुतो छैनन् । अहिले राज्यलाई उल्लिखित अल्पकालीन समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्नुका साथै ग्रसित क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि राहत प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गनुपर्ने चुनौती पनि देखिन्छ ।
कोरोना कहरले गर्दा हाल वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विशेष गरी खाडी मुलुकमा गएका कैयौं नेपाली युवा स्वेदश फर्केका छन् भने जीवनयापनका लागि सहरमा रोजगारी गरी बसेका युवाहरूसमेत गाउँतिर फर्किनुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था छ । विदेशबाट फर्किएका र फर्किन चाहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अवसरसमेत कोरोना कहरले जुटाएको छ । साथै अवसरको खोजीमा विगतका वर्षहरूदेखि पहाडी क्षेत्र छाडी सहरी क्षेत्र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा बसाइँसराइ गर्नेहरूका लागि पनि आफ्नै जन्मथलोको याद कोरोना कहरले दिलाइदिएको छ । कुनै समयमा कृषि उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भर रहेका केही मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा अहिले सक्रीय जनशक्तिको अभावमा खेतीयोग्य जमिनसमेत बाझिन पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूको जमातलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, बसाइँसराइ गरी पहाडी क्षेत्रबाट सहर जानेहरूको जमातलाई पुनः फिर्ता गर्न, खेतीयोग्य जमिन पुनः स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास तथा दिगो अर्थतन्त्र विकासका लागिसमेत सरकारले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित साहसिक नीतिगत उपायहरू अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ, साथै उक्त साहसिक नीतिहरूमध्येको एक २०७६ फागुन १९ गते गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको ‘गाँजा विधेयक’ उत्तम देखिन्छ ।
गाँजाको उत्पत्ति, प्रयोग र प्रतिबन्ध
तेस्रो सहस्राब्दी इसापूर्वमा गाँजाको उत्पत्ति मूलतः मध्यएसियामा भएको मानिन्छ र यसको प्रयोग कपडा, कागज, पाल र डोरीहरू बनाउनका साथै धार्मिक प्रयोग, औषधि र खानाका रूपमा समेत भएको पाइन्छ । सन् १८३० को दशकमा भारतमा अध्ययन गर्ने एक आयरिश चिकित्सकले गाँजाको अर्कले पेटको दुखाइ र बान्ता कम गर्न सहयोग पु¥याउने पत्ता लगाएका थिए । १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर गाँजाका अर्कहरू युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाका फार्मेसी र डाक्टरहरूले पेटको उपचार र अन्य बिरामीहरूको उपचारको लागिसमेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा विशेष गरी युवा र कजेलका विद्यार्थीहरूले गाँजाको प्रयोग अत्यधिक गर्न थाले, साथै यसलाई मध्यमवर्गीय सांस्कृतिक मूलधारमा ल्याएका थिए । अन्य राष्ट्रहरू ब्रिटेन, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका युवा तथा कजेलका विद्यार्थीहरूले समेत यसको अत्यधिक प्रयोग गरेको पाइयो । सन् १९६० को दशकमा नेपाल आउने पर्यटकहरूको पनि पहिलो रोजाइ नेपालमा उत्पादित गाँजा र चरेस हुने गथ्र्याे । विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रयोग फैलिँदै गएको थियो ।
अन्ततः औषधिविरुद्धको युद्धअन्तर्गत गाँजालाई अनुसूची १ बमोजिमको औषधिका रूपमा सूचीबद्ध गरी ड्रग डिलर र प्रयोगकर्ताहरूलाई जेल सजाय बढाउँदै अवैध लागूऔषधको प्रयोग, वितरण र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् १९७० र १९८० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाँजा उत्पादन र तस्करी गर्ने देशहरूमा विदेश नीति लागू गरी प्रतिबन्ध गर्न थप दबाब दियो । अमेरिकाले सन् १९७३ मा नेपालमा कानुनी रूपमा गाँजा बिक्री–वितरण गर्ने स्टोरहरू बन्द गर्न दबाब दियो र नेपालमा समेत कानुनी मान्यताको अन्त्य भयो । हाल नेपालमा गाँजा खेती गर्नु कानुनविपरीत मानिन्छ, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा घरायसी औषधि प्रयोजनका लागि अवैधानिक रूपमा सानो क्षेत्रमा खेती गर्ने गरेको पाइन्छ । हाल अमेरिकामा संघीय स्तरमा गाँजाको प्रयोगलाई प्रतिबन्धित गरिए तापनि विभिन्न ११ प्रान्तमा यसलाई मनोरञ्जनका रूपमा प्रयोग गर्न कानुनी मान्यता दिइएको छ, साथै ३३ प्रान्तमा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि प्रतिबन्ध खुला गरिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकले गाँजाको प्रयोग औषधिका रूपमा गर्न प्रतिबन्ध खुला गरिसकेका छन् भने हालसम्म क्यानडा, जर्जिया, दक्षिण अफ्रिका र उरुग्वेले मात्र गाँजाको प्रयोग मनोरञ्जनका लागि खुला गरेका छन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । साथै विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमितहरू बढ्ने क्रम र छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत संक्रमितहरूको संख्या वृद्धि भई लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै नेपलमा पनि उक्त अवधि थप हुँदै गएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सेवालगायतका क्षेत्रहरूमा थप संकुचन आउने निश्चितप्रायः छ । संक्रमणका कारणले अस्ताउन लागेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान गराउनका लागि सरकारसामु बढ्दो चुनौती रहेको छ । अमेरिकाको डाटाट्रेक रिसर्चकी को–फाउन्डर जेसिका रबेले भनेकी छन्– कोभिड–१९ महामारीपछी न्युयोर्क प्रान्तको बजेट घाटालाई सन्तुलन गर्न एक सरल र प्रभावकारी समाधान भनेको गाँजाको मनोरञ्जनकारी बिक्रीलाई वैध बनाउने । नेपालमा पनि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको गाँजा विधेयक संसद्बाट पास भई गाँजा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिएमा अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय र सकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक बनावटले समेत यसको उत्पादनलाई थप सहायता पुग्दछ भने पहाडी क्षेत्रमा लामो समयदेखि बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनको समेत उपयोग हुने देखिन्छ, जसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकासका लागि थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । मूलतः यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा तपसिलबमोजिमका थप सहायता पु¥याउन सहयोग गर्छ ।
१. मध्यपहाडी क्षेत्रको हिमालयन चट्टान र खनिजसँग मिश्रित माटोमा उत्पादित गाँजाको माग अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत उच्च रहेकोमा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न गई उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा समेत टेवा पुग्छ । साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याई सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्छ र उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको दिगो जीवनयापनका लागि उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको समान वितरणमा समेत निश्चितता हुन्छ । कोरोना कहरले आफ्नो घर फर्किएका ऊर्जाशील युवाहरूको अबको गन्तव्यस्थल ग्रामीण क्षेत्र हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
२. अत्यधिक बेरोजगारी र गरिबीको समस्याको अन्त्य हुने सम्भावना रहन्छ । प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका बेरोजगार, दक्ष जनशक्तिको पलायन र गरिबीजस्ता समस्याहरूको अन्त्य गर्न बेरोजगार युवाहरू र रोजगारीका लागि विदेश जाने ऊर्जावान् युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा थप रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन् ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजाको अत्यधिक माग भएकोमा नेपालमा उत्पादित गाँजाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा गर्न सकेमा निर्यात गरी वैदेशिक विनिमय आम्दानी गर्ने अवसर हुन्छ, जसबाट अत्यधिक व्यापारघाटा न्यूनीकरण भई भुक्तान सन्तुलनमा समेत सहयोग पु¥याउँछ । विप्रेषणमा निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सक्छ, साथै निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीले सहज रूपमा विप्रेषणको आम्दानीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।
४. वित्तीय साधन–स्रोतहरूको समान वितरणमा सुनिश्चितता हुन्छ । हाल नेपालमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सिमित क्षेत्रमा विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भएको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरू कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति पनि न्यून रहेको छ । गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि उक्त क्षेत्रमा आकर्षित भई बाक्लो उपस्थिति हुने देखिन्छ ।
५. क्यासिनो मोडलमा गाँजाको प्रयोगलाई मनोरञ्जनका लागिसमेत खुला गरेमा नेपाल बाह्य पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा कोरोना महामारीबाट धराशय भएको नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन सक्छ, साथै प्रस्तावित पर्यटन वर्ष २०२२ लाई समेत सफल पार्न महत्वपूर्ण योगदान रहन सक्छ ।
६. प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने नेपालका लागि उक्त घाटा न्यूनीकरणको लागि उपयोगी हुने देखिन्छ । उत्पादन, बिक्री–वितरण र निर्यातमा लगाइने करबाट राज्यको आम्दानीका दायराहरू बढ्न गई घाटा बजेट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, साथै घाटा बजेट परिपूर्तिका लागि वैदेशिक ऋण लिने प्रथाको न्यूनीकरण समेत गर्न सकिन्छ ।
७. संयुक्त राष्ट्रसंघमा कम विकसित राष्ट्रका रूपमा सूचीकृत नेपाललाई आगामी दिनमा विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्न कोरोनाका कारणबाट थप समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ, यद्यपि नेपाल विकासशील राष्ट्रको उपाधि प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख तीन मापदण्डमध्ये मानव सम्पत्ति सूचांक र आर्थिक जोखिम सूचकको लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय लक्षित स्तरभन्दा कम रहेको देखिन्छ । नेपालको विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुने सपना गाँजा अर्थतन्त्रले सावित गर्न सक्नेछ ।
गाँजाको माग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दै जाने देखिन्छ, विशेष गरी यसको प्रयोग औषधि प्रयोजन र मनोरञ्जनका लागि रहेको छ । गाँजाका दुवै शारीरिक र मानसिक असर रहेका छन्, यसको प्रयोगले मानिस अचानक खुसी हुने, मुडमा परिवर्तन हुने, संवेदनशील हुने, अत्यधिक भोक लाग्ने लगायतका प्रभावहरू हुने गर्छन् । यद्यपि यसको प्रयोग क्यान्सर, बाथ, मानसिक रोग, पार्किन्सन रोगहरू साथै अल्जाइमरजस्ता रोगहरूको उपचारका लागिसमेत विभिन्न मुलुकमा प्रयोग भएको पाइन्छ ।
बुढेसकालमा हुने दीर्घकालीन दुखाइहरूको न्यूनीकरणको लागिसमेत व्यापक रूपमा प्रयोग हुने र क्यान्सर संक्रमित बिरामीहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको माग बढ्ने देखिन्छ । अमेरिकाको एक प्रतिष्ठित संस्था ग्रान्ड भ्यू रिसर्चले हालसालै प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार वैधानिक रूपमा गाँजाको विश्व बजारको आकार सन् २०२७ सम्ममा अमेरिकन डलर ७३.६ अर्ब (नेपाली रुपैयाँ करिब ८८ खर्ब) हुने अनुमान गरेको छ साथै सन् २०१९ मा उक्त बजारको आकार अमेरिकन डलर करिब १७.७ अर्ब (नेपाली रुपैयाँ करिब २१ खर्ब) रहेको थियो । गाँजाको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजार उत्तर अमेरिकी मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिको रहेका छन्, साथै युरोपमा समेत यसको बजारको आकार वृद्धि हुँदै गएको छ । साथै भारतको फर्चुन बिजनेस इन्साइटले गरेको प्रक्षेपणअनुसार गाँजाको विश्व बजारको आकार सन् २०२६ मा अमेरिकन डलर ९७.३५ अर्ब (नेपाली रुपैयाँ करिब ११७ खर्ब) हुने अनुमान गरेको छ ।
नेपालमा कानुनी मान्यता नभए तापनि अवैद्यानिक रूपमा यसको बिक्री–वितरण भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आपूर्ति हुने खबरहरू समय–समयमा आउने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष गरी गाँजाको कोपिला, तेल र टिन्चरको अत्यधिक बजार रहेको छ, जसमध्ये सन् २०१९ मा कोपिलाको बजारको आकार अत्यधिक रहेको थियो, साथै आगामी दिनमा समेत यसको माग बढ्ने देखिन्छ । क्यान्सर र अन्य रोगहरूको उपचारको अनुसन्धानमा गाँजाको व्यापक प्रयोग गरेका जमैकाका एक चर्चित वैज्ञानिक डा. हेनरी लोवले हाल कोरोना संक्रमित सदस्यमा गरेको परीक्षणमा प्रभावकारी देखिएकाले थप परीक्षणको लागि पेटेन्ट स्वीकृतिको माग गरिसकेका उनले केही दिनमै कोभिड–१९ विरुद्ध उपयोगी सावित हुने–नहुने पत्ता लाग्ने बताएका छन् । क्यान्सरलगायत अन्य रोगहरूको उपचारमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको गाँजा कोभिड–१९ विरुद्ध उपयोगी सावित भएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको माग थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । अमेरिकाको एक म्यागेजिन कानाविस बिजनेस टाइममा उल्लेख भएअनुसार सन् २०२० अप्रिल ३ मा गाँजाको बजार मूल्य नेपाली रुपैयाँ ३ लाख ६९ हजार प्रति के.जी. रहेको छ । सन् २०१८ मा विडिनडेक्सडटओआईले प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार जापानको टोकियोमा सबै भन्दा बढी गाँजाको प्रतिग्राम मूल्य अमेरिकन डलर ३२.६६ रहेको थियो जसको हालको नेपाली सरदर मूल्य रु. ३९ लाख प्रति के.जी. हुने देखिन्छ, जहाँ गाँजा उत्पादन र बेचबिखनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । साथै युरोपका १० प्रमुख शहरूको तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दा त्यहाको प्रतिग्राम औसत मूल्य अमेरिकन डलर १४.८० रहेको छ, जुन अहिलेको औसत विनिमय दर १२० ले हिसाब गर्दा पनि नेपाली रुपैयाँ करिब १७ लाख ७६ हजार प्रति के.जी. पर्ने देखिन्छ । यद्यपि युरोपका कतिपय देशमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कतिपय राष्ट्रमा औषधिका रुपमा प्रयोग गर्नको लागि खुल्ला गरिएको छ, साथै आगामी दिनमा युरोपियन बजारमा यसको माग वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी गुणस्तरीय गाँजा निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउन सकेमा नेपालको गाँजाको प्रमुख बजार युरोपियन मुलुकहरू रहन सक्छन् ।
अन्त्यमा, गाँजा नेपालका लागि कुनै नौलो उत्पादन होइन, परापूर्व कालदेखि नै नेपालको माटोमा उत्पादन भइआएको वनस्पति हो, खेती नगर्दा समेत जस्तोसुकै खेतीयोग्य जमिनमा आफैं उम्रिने र सबैभन्दा दु्रत गतिमा वृद्धि भइरहने कृषि बालीमध्येको एक उप्पादन गाँजा हो । यसको उत्पादनका लागि जैविक अवशेष, पृथ्वीको माथिल्लो तहको माटो र ढुंगाको कणहरू मिश्रित भएको माटोमा एकदमै कम मलखादलगायत कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, साथै फसल प्रशोधन गर्नसमेत कम समय लाग्ने र अत्यन्त न्यून वातावरणिय प्रभाव भएको वनस्पतिका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्यले आफ्नो आम्दानीका स्रोतहरूको दायरा बढाउनका लागि बहुउपयोगी गाँजा उत्पादन अत्यन्त उपयोगी वनस्पति सावित हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि प्रदान गर्दै आइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा गाँजाको उत्पादनलाई समेत जोड्न सकेमा थप प्रभावकारी भई उच्च प्रतिफल प्रात्प गर्न सकिने देखिन्छ । युरोपियनलगायत अन्य पश्चिमी मुलुकहरूमा यसको उत्पादन र प्रयोगको निश्चित मापदण्डहरू बनाई औषधि प्रयोजन र मनोरञ्जनका लागि प्रतिबन्ध खुल्ला गरी यसबाट सरकारले आम्दानीका दायराहरू बढाएको देखिन्छ । हानिकारक पदार्थहरू जस्तै सुर्ती, तम्बाखु र रक्सीको तुलनामा यसको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर नगर्ने हँुदा गाँजाको वैधानिकता हुने कुरामा कुनै शंका देखिँदैन । तसर्थ ग्रामीण अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकासका लागि, मेहनती किसानहरूको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउनका लागि, वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्नका लागि, पर्यटकीय गन्त्यव्यका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नका लागि, व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि, वैदेशिक विनिमय आम्दानीका लागि, भुक्तानी सन्तुलनका लागि, स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि, सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन र कोरोना कहरले धराशय बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि प्रतिनिधिसभामा प्राइभेट बिलमार्फत पेस भएको गाँजा विधेयक नियन्त्रित उत्पादन र प्रयोजनका निश्चित दायराहरू तोकी राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी रहने गरी संसद्बाट पारित गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
अर्थतन्त्र र पुँजीबजारमा कोरोनाको असर
अर्थशात्रीहरूले गरेका अध्ययन–अनुसन्धानअनुसार महामारी र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध नकारात्मक हुन्छ । संसारका हरेक देशमा भाइरसको महामारीका कारणले लकडाउन गरिएको छ, जसले आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा असर देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ, समाजमा घर झगडा, चोरी–डकैति, हिंसाजस्ता घटना बढेका छन् । स्कुल कलेज बन्द छन् । बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन् र उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न थालेको छ । लकडाउन खुलेपछि उनीहरू स्कुल जान मान्ने अवस्था छैन । कतिपय देशमा राजनीतिक उथलपुथलकै चर्चा सुनिन थालिएको छ । यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा लकडाउनको असर परेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा लकडाउनले पर्ने असरको कुनै लागत संकलन गरेको छैन । लागत संकलन नगरीकन अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको वित्तीय प्याकेज घोषणा गर्ने भन्ने अन्योल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले र अर्थ मन्त्रालयले केही अल्पकालीन राहतको घोषणा त गरे, तर त्यो पर्याप्त देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई घोषणा गरेको राहतमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको सुनिन्छ । अस्पतालहरुले दीर्घ रोगीलाई उपचार गर्न छोडेका छन् । राहत प्याकेजमा औषधि तथा नगदको व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता मानिसहरू धेरै प्रभावित भएका छन् । औषधि पसलहरू खुला त छन् तर किन्न सक्ने क्षमता छैन ।
नेपालमा दीर्घकालीन अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्ने प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा दुवै निकाय मौन छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा आर्थिक स्तिमुलस प्याकेजको घोषणा अब आउने बजेटमा गर्ने भनेका छन्, जुन अर्थतन्त्रका लागि ढिला हुने देखिन्छ । लकडाउनका कारणले प्रभावित हुने क्षेत्र भनेका पर्यटन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, यातायात, वैदेशिक रोजगारी, उद्योग व्यापार र निर्माण व्यवसाय, साना तथा मझौला स्वरोजगार उद्योगहरू हुन्, जसमध्ये पनि सेवा क्षेत्र धेरै प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालमा अहिले करिब ७० लाख १० हजार मानिस रोजगारी छन् जसमध्ये २३.८ प्रतिशत जनशक्ति सेवा र बिक्री पेसामा आबद्ध छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ११ लाख, यातातातमा १० लाख, उद्योग व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा ३३ लाख मानिस काम गर्छन् जसमध्ये उद्योग, व्यापारको हिस्सा १७.५ प्रतिशत (१२ लाख ४० हजार) रहेको छ । उत्पादन (प्रशोधन) क्षेत्रमा १५.१ प्रतिशत (१० लाख ७२ हजार) छन् । त्यस्तै, निर्माण उद्योगमा १३.८ प्रतिशत (९ लाख ७८ हजार) मानिसहरू काम गर्छन् ।
नेपालको श्रमबजार औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर धेरै छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार कुल रोजगारीको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा र ६५.५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । सबैभन्दा धेरै असर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरमा पर्छ । विश्वको आँकडा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कोरोनाबाट करिब २ अर्ब ७० लाख कामदार प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो विश्व कार्यशक्तिको ८१ प्रतिशत हो । करिब २० करोड पूर्णकालीन रोजगारी गुम्ने आकलन गरिएको छ । होटल, खाद्य क्षेत्र, निर्माण र खुद्रा क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १ अर्ब २५ लाख मानिस सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालमा पनि लकडाउन अझै लम्बिँदा करिब ८० प्रतिशत मानिसहरूले रोजगारी गुमाउने छन् । यस्ता समस्या आउन नदिनका लागि राज्यले वैकल्पिक उपायका बारेमा समयमै सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको करिब ४० लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमा छन् । कतिपय युवा भिसा लागेर पनि जान पाएका छैनन् । विप्रेषण घट्दै गइरहेको अवस्था छ, फागुनमा मात्र विप्रेषण आम्दानी २.५ अर्बले घटेको छ र चैत महिनामा यसको असर भयावह हुने देखिन्छ, जसका कारणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचत घटिरहेको छ । प्रत्येक घरपरिवारको आम्दानी घटिरहेको छ । राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रमा अपुरणीय क्षति हुने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टिलिनाले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइसकेको, जुन २००८ को भन्दा खतरनाक हुने चेतावनी दिएकी छिन् । विश्वका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा नीति–निर्माताहरूले अबको विश्व अर्थतन्त्रलाई १९२९ को आर्थिक महामन्दीसँग तुलना गर्न थालेका छन् । विश्वमा आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । विश्व बैंक र आईएमएफले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतसम्म खुम्चने प्रक्षेपण गरेका छन् र यसै सन्दर्भमा विश्व बैंकले जारी गरेको दक्षिण एसिया इकोनोमी फोकसमा सन् २०२० मा नेपालको पनि आर्थिक वृद्धि १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बन्द छन् । विकास–निर्माण तथा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सुचारु छैनन् । फागुनदेखि असारसम्म करिब ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने हाम्रो देशमा करिब १४ प्रतिशतमा सीमित छ । जीडीपीमा करिब २२ प्रतिशत योगदान गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूले मात्र करिब १७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । यी उद्योगहरू अहिले बन्द छन् । कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन, जसको अर्थ उन्नत बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, आधुनिक औजारहरू राज्यले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । नेपालको कृषिक्षेत्रमा मात्र करिब १५ लाख मानिस अनौपचारिक तरिकाले काम गर्छन् । आयात र निर्यात ठप्प हुँदा सरकारको राजस्व तथा चालू खाता दिनानुदिन घाटामा छ ।
अर्थतन्त्र र पुँजीबजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । पुँजीबजारले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि पुँजी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ । कोरोना भाइरसका कारणले संसारका सेयर बजार प्रभावित भएका छन् । लगानीको अनिश्चितताका कारण विश्वभरि नै सेयर बजार ओरालो लागेको छ ।
लकडाउनको कारणले विश्वका सेयर बजार कोही बन्द छन् भने कोही आंशिक रूपमा सञ्चालित छन् । नेपालको सेयर बजार पनि लकडाउनको दिनदेखि नै बन्द छ, जसले गर्दा राज्य र ब्रोकरको आम्दानी घटेको छ भने लगानीकर्ता बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्नुपर्ने कारणले मारमा छन् । अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन, तरलता सहजता, धितो बोर्डमा नयाँ नियुक्तिजस्ता कारणले फेब्रुअरी २० मा १६३२ अंकमा पुगेको नेप्से करिब १३ दिनमा कोरोना भाइरसकै कारणले २३ प्रतिशत घटेर १२५६ अंकमा आएको छ । यो अवस्थाले के बताउँछ भने नेपालको सेयर बजार पनि कोरोना भाइरसले प्रभावित छ ।
नेपालको सेयर बजारको संरचना हेर्दा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले मात्रै करिब ६६ प्रतिशत ओगटेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधनले ३.८ प्रतिशत तथा होटल र व्यापारिक संस्थाले ३ प्रतिशत ओगटेका छन् । भाइरसको कारणले सबैभन्दा धेरै असर गर्ने क्षेत्र भनेको उत्पादन तथा होटल व्यवसाय हुन्, जसको योगदान सेयर बजारमा न्यून छ । सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा असर नपरोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले बैंकदर कटौती, सीआरआरमा १ प्रतिशतले खुकुलो, पुनर्कर्जाको सीमामा वृद्धि, कर्जा, ब्याज पुँजीकरणको समय पनि बढाएको छ, जसले गर्दा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तरलता सहज भई ब्याजदर घट्छ जसले गर्दा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले आक्रामक तरिकाले लगानी गर्न नसक्ने, उद्योग तथा निर्माण व्यवसाय बन्द हुने जस्ता कारणले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्न गई नाफा बाँड्ने क्षमता पनि घट्ने निश्चित छ, तर यसले ठुलो असर पर्ने देखिँदैन ।
लकडाउनपछिको पुँजीबजार भने सकारात्मक हुने नै देखिन्छ, तर लकडाउन धेरै लम्बियो भने पुँजीबजार पनि अछुतो भने हुने छैन । राज्यले दीर्घकालीन रूपमा समस्याको हल गर्नका लागि स्तिमुलास प्याकेज घोषणा गर्दा पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ, जसका लागि राज्यले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने गरी सेयर कर्जालाई केही खुकुलो बनाउने, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने, अनलाइन कारोबारलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने तथा अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण माग वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
मुस्लिम आयाेगकाे अतिवादी साेच : मस्जिद र मदरसामा अनुगमन केका लागि ?
-ताज मोहम्मद मियाँ (हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष)
नेपाली मुस्लिम समुदाय गलत रहेछन भन्ने कुरा मुस्लिम आयोगको गतिविधिले प्रमाणित गरिदिएको छ । प्रसंग मुस्लिम आयोगले गठन गरेको कथित अनुगमन उपसमितिको हो । मुस्लिम आयोगले नेपालका कुनै पनि मस्जिदमा जमाती लुकेका छैनन र फसेका पनि छैनन भन्यो । हामीले पनि त्यही भन्यौं । मस्जिदमा कोही लुकेका छैनन र फसेका पनि छैनन भने आखिर यो अनुगमन केका लागि हा ? किन यो अनुगमनको नाममा मुस्लिम समुदायलाईमात्र आतंकित पारिएको छ ? के नेपालमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुमात्र छन ? कसलाई देखाउन र कसलाई रिपोर्ट बुझाउन यस्ता कार्य गरिएको छ ? यसको भित्री उद्देश्य के हो ? यी र यस्ता कैयन सवालबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आएको छ । या त नेपाली मुस्लिम कोरोना भाइरस फैलाउनमा सक्रिय रहेका वा कोरोना बम मुस्लिम हो भन्न सक्नुपर्यो होइन भने मुस्लिम आयोगले घुमाउरो पाराले विशेषत: मुस्लिमहरुलाई मात्र अनुगमन र खानतलासी किन गर्नुपर्‍यो ?
नेपालमा ५–६ वटा यस्ता आयोग छन , तर ती संबैधानिक आयोगले यस्तोमा किन हात हाल्दैनन् । मुस्लिम आयोगको उक्साहटमा बारम्बार मस्जिद मदरसामा केका लागि प्रहरी प्रशासनले अनुगमन गर्दैछ राज्यले ? नेपालमा मुस्लिमहरुकामात्र धार्मिक स्थल छन ? यो अनुगमन समिति बनाउँदा यसले के असर पार्छ समुदाय समुदायबीच ? एउटा बिशेष समुदाय अपराधी जस्तो भएर खुम्चेर बस्छ भने अरु समुदायले सधैं मुस्लिमहरु त यस्ता पो रहेछन् भनेर कोच्नेछ्न र समुदाय अपमानित भएर बस्न बाध्य हुनेछ सधैंका लागि । के यही हो आयोग को काम र कर्तव्य ? यो सिंगो समुदायलाई अपराधीकरण गर्न आयोग किन तल्लीन छ, यो सम्पुर्ण मुस्लिम समुदायहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।
आयोगको यो अतिबादी सोचका कारण नेपाली मुस्लिम दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भन्ने एकातिर प्रमाणित गरेको छ भने अर्कोतिर आफूबाट भए गरेका गल्ती उपसमिति नामक अस्त्रमार्फत् समुदायको टाउकोमा तरवार धुण्याउने जमर्को गरेको देखिन्छ । हिजो र आज सामाजिक संजालमा आयोगले नियुक्ति दिएका ब्यक्तिले सूची राखेको देखियो । वास्तवमा यो आफैमा अबैधानिक पनि छ । त्यो सूचीभित्र नाम परेका केही ब्यक्ति खुसीले फुलेका छन् भने नाम नपर्ने ब्यक्ति मन दुखाएर मरिच जसरी खुम्चेका पनि छन् । यो फुल्नु पनि गलत हो र खुम्चिनु पनि गलत हो । आयोग र आयोगलाइ समर्थन गर्न तम्सेका दुई चार जनाको दिमागमा यो किन गएन कि यो धर्मनीरपेक्ष मुलुक हो, यहाँ राज्यले सबैलाइ समान नीति नियम बनाएको छ र कसैलाइ काखा कसैलाइ पाखा राज्यले पटक्कै गरेको छैन भनेर । तब पनि आखिर मुस्लिम समुदायको धार्मिकस्थलमा अनुगमन किन भनेर सोच्न सक्नु भएन ? यो आत्मघाती र दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो ।
त्यसै त मुस्लिम समुदाय विभिन्न भारतीय वा स्वदेशी बिकाउ मिडियाद्वारा लगाइएको आरोपबाट तनावमा रहेकाे छ । त्यसमा पनि यो अनुगमनले मुस्लिमले नै कोरोना फैलाउने प्रमुख भूमिका खेलेको र मस्जिद मदरसामा लुकिछुपी बसेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । अधिकॉश मुस्लिम समुदायहरुले यो बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् र लिने पनि छन् । यो देशमा सदियौंदेखि मिलेर बसेका समुदाय–समुदायबीच शंका उपशंका गराउनेतिर आयोग नलागाेस र सद्भाव सहिष्णुता एकतामा जोड देओस । राज्यले मुस्लिमका लागि एउटा कानुन, अरुका लागि अर्को कानुन अहिलेसम्म लागू गरकाे पनि छैन र गर्ने पनि छैन । तसर्थ आयोगले मिलेर बसेका समुदाय समुदायहरु बीच अविश्वासको बातावरण सिर्जना गराउने काम नगरोस् भन्ने आग्रह गर्दै यस्ता उट्पट्याङ खालका काम नगर्न सचेत समेत गराउँदछु ।
कोरोना कहरमा पनि कमाउने र रमाउनेहरु
चीनमा उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वप्यापी भएको छ । कोरोना कहरले मानव दिनचर्यालाई अस्तव्यस्त बनाउँदै गएको जगजाहेर छ । कोरोना आक्रमणबाट धनी गरीब, ठूलो सानो, शक्तिशाली निमुखा, महिला पुरुष, जातजाति, भौगोलिक अवस्थिति आदिमा विभेद नगरी आक्रमण गरिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा आइलागेको यस संकटले सर्बत्र अस्तव्यस्त र अन्यौलता छाएको छ । अदृश्यकाल बनेर अहिले कोरोना विश्वभर घुम्दै छ । चिकित्सा क्षेत्रमा मानवले गरेको वैज्ञानिक चमत्कारलाई समेत चुनौति बन्दै गएको छ कोरोना । सर्बत्र संक्रमणको त्राहीमाम छाइराखेको अवस्थामा केही मतिभ्रष्टहरु व्यक्तिगत लाभका लागि कमिशन र कालोबजारीमा कमाउन र रमाउन तल्लिन देखिदै छन् ।
मानव सभ्यता र समाजलाई तहसनहस पार्ने गरी दिनानुदिन फैलिदै गएको यस अदृश्य शत्रुलाई परास्त पार्ने ठोस उपाय र औषधि अहिले सम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन् । विश्वका स्रोतसाधान सम्पन्न धनि देशहरुमा यसको प्रकोप झन डरलाग्दो हुँदै गएको छ । चीनपछि युरोपका देशहरु इटाली, स्पेन, फ्रान्समा मात्र नभएर विश्व सर्वशक्तिमान अमेरिकामा समेत कोरोनाले त्राहिमाम बनाउँदै छ । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रति दिन थपिँदै छ । अमेरिका जस्तो देशमा पनि स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधीहरुको अनिकाल बढ्दै गएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको अभाव पनि विस्तारै खट्किँदै छ । कोरोना संक्रमणको दुष्चक्रीय चेन तोड्न लकडाउन नै रोकथामको अहिलेसम्मको उत्तम उपाय ठहरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको कारणबाट खासगरी दैनिक काम गरेर बिहान बेलुकी छाक टार्ने विपन्न परिवारलाई लकडाउनले नराम्रोसँग अस्तव्यस्त बनाएको जगजाहेर छ ।
विपन्न, सुकुम्वासी, दैनिक ज्यालादारी, साना व्यवसायी लगायतका निम्न आय वर्गका परिवारलाई लकडाउनको निरन्तरताले कोरोना भाइरसको त्रासले भन्दा बढी भोकले पिरोलोको छ । यस वर्ग रोग र भोक दुवै शत्रुको सामना गर्न विविश छन् । आफ्ना अबोध बालबाच्चाको भोक मेटाउन झिनो आस गरेका सरकारी राहत प्राप्तिमा नागरिकता, सिफारिसलगायतको झमेलाले टाठाबाठालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । कोरोना लकडाउनको दुरुपयोग गर्दै गलत बाटोबाट कालो बजारी गरेर फाइदा लिने तत्वहरको लागि अहिले चिठ्ठा परेको छ । कोरोना कहरको चपेटामा परेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्नेको कमी नभएपनि अनेक तिकड्म संकटमा सम्पत्ति थुपार्नेहरुको जमातको कमी पनि छैन । मास्क, औषधी, खाद्य वस्तुहरुमा कृत्रिम अभाव बनाएर अत्याधिक मूल्यम बिक्री गर्नेहरु सलबलाएका छन । यस कुकृत्यमा लाग्ने केही कार्वाहीको दायरामा आए पनि स्थितिमा सुधार आएको छैन् ।
नेपालमा कोरोना परीक्षणको पर्याप्त प्रयोगशाला नभएकाले संक्रमणको खास स्थिति पत्ता लागेको छै्रन । घरमा आगो लागेपछि इनार खन्ने प्रवृत्तिको कारण कोरोना पहिचान र उपचार समयमा नहुँदा ठूलो विपत्तिको जोखिम उत्तिकै छ । भरखरै चीनबाट ठेकेदार मार्फत ल्याइएको चिकित्सकको सुरक्षाको लागि आवश्यक पिपिई तथा कोरोना भाइरस परीक्षण किटमा गुणस्तर र अनियमितता बारेको बहस चुल्लिएको छ । यस्तो राष्ट्रिय शंकट र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील विषयमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर प्रश्न उठ्नु निन्दनीय छ । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस भन्दा पनि मानवता विरोधी यस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचारको खतरा डरलाग्दो हो ।
समयमा कोरोना परीक्षण नहुदा अग्रपंतिमा रहेर काम गरिराखेका स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान जोखिममा रहन्छ नै । चीन बाट ल्याइएका सामग्री गुणस्तर र पर्याप्ततामा चिकित्सकहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । महामारी संकटबाट अक्रान्त देश र जनतालाई यो वा त्यो बहनाबाट लुट्ने यस्ता भाइरसहरुको उपचार बेलैमा गर्न सरकार चुक्नु हुन्न । समयमा कोरोना परीक्षण नहुनाका कारण कोरोना आशंकाको कारण अन्य बिरामीले उपचार नै नपाएर बुटवलमा एकजनाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् ।
भारतबाट आफ्नो मातृभूमी फर्किन लागेका नेपालीहरुलाई सीमा नाकामा रोकेर बिचल्ली बनेका दर्दनाक दृश्य टेलिभिजनमा देख्दा कुन नेपालीको मन नकुडिएला । बोल्नेको पिठो पनि विक्ने नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने भने झैं चीनको वुहानबाट प्लेन चार्टड गरेर सरकारी खर्चमा नै खरीपाटीमा १४ दिन कोरेन्टाइनमा राख्ने सरकार स्वदेशमा रोजगार नपाएर मजदुरी गर्न भारत गएका निमुखा जनताप्रति देखाएको रवैया उदेक लाग्दो छ । नेपाल भारतका वोर्डरमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको कोरोना परीक्षण तत्कालै गर्न सकेको भए यो अपजस सरकारले व्यहोर्नु पर्ने थिएन । ज्यान जोखिम मोल्दै महाकाली नदीमा हाम फालेर एउटा कट्टुको भरमा आफ्नो मातृभूमीमा नै मर्छु भनेर आउने इन्द्रसिंह खत्री जस्ता स्वाभिमानी जनताको सेवा र समरक्षण गर्ने सरकारको दायित्व हो ।
बुद्धिमान देखेर र मूर्ख परेर चेत्छ भने झैं हामीले पनि अरुको अवस्थाबाट सिकेर बेलैमा कोरोना विरुद्धको मार्गचित्र बनाएर नै रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन । विश्वका कतिपय देशहरुले कोरोना संक्रमणलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर लकडाउन गर्ने लहर नै चलेको छ । मनिसको जमघट हुने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा, समारोह, सम्मेलन, पर्व उत्सव स्थगित गरिएका समाचारहरु एकपछि अर्को आइराखेका छन् । कोरोनाको संक्रमणको डरले साउदी अरबले विदेशी मुस्लिमलाई पवित्र तीर्थस्थल मक्का र मदिनाको तीर्थयात्रामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मौजुुदा परिस्थतीमा सुधार नआएर जोखिम कायमै रहेमा साउदी अरबमा मूसलमानहरुको पवित्र तीर्थाटन हज र जुलाइमा जापानको टोकियोमा हुने ओलम्पिक खेल समेत एक वर्षका लागि स्थगित गरिएको छ । विश्व नै लकडाउनबाट ठप्प हुँदै छ ।
वर्तमानमा कोरोनाको उपचार असम्भव भएपनि रोकथाम सम्भव छ । अहिलेसम्मको अध्ययन र अनुभवबाट कोरोना संक्रमितमध्ये २ देखि ३ प्रतिशतको मात्र मृत्यु हुने देखिएपनि यसको निश्चित उपचार विधि पत्ता लागिसकेको छैन । यसको उपचार भन्दा पनि रोकथामका उपायहरु प्रभावकारी रुपमा अबलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । रोगको लक्षण र सर्ने माध्यम तथा बच्ने उपायहरु बारे व्यापक जनचेतनाको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । मनिसले आफ्नो बानी व्यहोरा र आहार, स्वस्थकर बनाएमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सकिने स्वास्थ्यकर्मीको सुझावलाई आत्मसात गर्ने तर्फ हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको औषधी पत्ता नलागेकोले रोकथाम नै यसबाट बच्ने उत्तम उपाय भएको छ । जनसम्पर्कबाट सहजै सर्ने यस भाइरसबाट बच्ने उपाय भनेकै मानव जमघटलाई बन्देज वा कम गर्नु नै हो । अहिले देशमा लकडाउन चलेको छ । साथै सभा सम्मेलन लगायतका भीडभाडजन्य कार्यक्रम नगर्न नगराउन सरकारले अपील गरेको छ । सरकारी निकायबाट आदेश, निर्देश र अपीलका कागजी झटारोले मात्रै भविष्यमा आइपर्ने विपत्ति टर्ने छैन । कोरोनाविरुद्धको भाषण र आश्वासन भन्दा एक्सन अहिलेको आवश्यकता हो । लकडाउनलाई अनुशासित बनाउन, आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन तथा अनियमिततालाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्न अन्य देशहरुको जस्तै आवश्यकता अनुसार सेना नै परिचालन गर्न पछि हटनु हुन्न ।
कोरोना कहरभित्रको सकारात्मक पक्ष
अन्ततः जीवनरक्षा र अस्तित्वको प्रश्नमा अन्य सबै सवालहरू तपसिलमा पर्छन् भन्ने कुरालाई अहिलेको महामारीले थप प्रस्ट्याएको छ । खतरनाक कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी फैलावटले जीवनप्रतिको दृष्टिकोणमा पनि केही बदलाव आउन थालेको छ । जीवन र जीवनको सारलाई हेर्ने आँखीझ्याल फेरिएको भान भएको छ । उपभोक्तावादी संस्कृतिले उक्साएको भौतिक सुखभोग, सुविधामोह र द्रव्य आर्जनको तँछाडमँछाडमा समेत विचलनका केही संकेत देखा पर्दैछन् । अहिलेको यो कालरात्रि विगतमा मानिसले गरेको प्रकृतिमाथिको भद्दा मजाक, अन्याय र जवर्जस्त दोहनविरुद्धको प्रतिक्रिया र परिणति पनि हो ।
विज्ञान र प्रविधिको एकलकाँटे साम्राज्यले आफ्नो तुच्छ स्वार्थ सिद्धि र विकासको जात्रा देखाउने लहडमा पृथ्वी नै छियाछिया भइसकेको छ । सबै शक्तिको हर्ताकर्ता सम्झेको मानिसको बोक्रे रवैयाले आफैँलाई विनाशकारी खाल्डोतर्फ घचेट्दैछ । प्रकृतिको सन्तुलनलाई विथोलेर करोडौं जीवनकलाई हाहाकार मच्चाएको मानिसले अक्षम्य अपराध गरेको छ ।
लाखौँ जीवको अस्तित्व मेटेको सोही मान्छेलाई आज अति सूक्ष्म भाइरसले निलिरहेको छ । अन्य प्राणीको समेत सेवा गरेर प्रकृतिको संरक्षण र पूजा गर्ने अभिभारा पाएको मानव आफ्नै बुद्धिवर्कतको दुरुपयोग गरी सृष्टिबाटै पलायन हुने यात्रा तय गरिरह्यो । मानव अधिकारका चर्का नारा लगाउने मानवतावादीहरू जैविक अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्नेका विरुद्ध भने चुइँक्कसम्म बोलेनन् ।
आडम्बरको बर्को ओढेका केही बहुलठ्ठकहरूको अहम् तुष्टिका लागि सिङ्गो मानव समुदायले पटकपटक उच्च मूल्य चुकाउनुपरेको छ। जतिसुकै हठी, दम्भी र घमण्डी भए पनि मृत्युसँग भने हरेक मान्छे झुक्दो रहेछ, हार्नुपर्दो रहेछ । हरेक कुराको आफ्नो सीमा भएझैं प्रकृति पनि सहनशीलताको पराकाष्ठामा पुग्यो होला । आफ्नो सन्तुलन मिलाउन बेलाबखत यस्ता क्रिया प्रतिक्रिया जनाइरहन्छ ।
हुन त प्रकृतिको आफ्नो नियमित जीवनचक्रले पनि समयसमयमा विभिन्न प्रकोप, उत्पात र वितण्डा मच्चाइरहेकै हुन्छ तर त्यसमा मानवीय कारण पनि कम्ती जिम्मेवार छैनन् । अहिलेको विश्व राजनीति, अर्थनीति, साँस्कृतिक मान्यता, संस्कार, सभ्यता, जीवनशैलीलगायतका विभिन्न आयाममा फेरि एकपटक संशोधन, परिमार्जन तथा नवनिर्माणको आवश्यकता देखिएको छ । मानिसले पनि आफ्नो सीमाबोध र धर्मबोध गर्न सक्नुपर्छ । मानिस मानवतावादी मात्र भएर पुग्दैन, प्रकृतिमैत्री र सम्पूर्ण जीववादी बन्नुपर्छ । किनकि मानिसमाझैँ अन्य जीवमा परोपकारभाव र सुद्धिचेत छैन ।
प्रकृति खल्बलिनु भनेको हाम्रो जीवन तथा अस्तित्व समेत भस्म हुनु हो । त्यसैले प्रकृतिमुखी भएर मात्रै हाम्रा समग्र क्रियाकलाप सञ्चालित हुनुपर्छ । बेलाबेला प्रकृतिले देखाउने अनिष्ट धक्काको सामना गर्न सकिने गरी हाम्रो जीवनशैली, विकासविधि, अर्थनीतिको जग तय गरिनुपर्यो । जसबाट यस्ता संकटका विभिन्न शृंखला छिचोल्न सकियोस् ।
तर अफसोच ! इतिहासमा मानिसले प्रकृतिद्रोही, गद्दारी क्रियाकलापबाट कैयौँ भीषण दुर्घटना भोगे पनि त्यसबाट कहिल्यै सवक लिएन । अहिले साम्राज्यवादी, नव औपनिवेशवादीदेखि विस्तारवादी शक्ति समेत कोरोनाको कहरबाट आक्रान्त छन् । अन्तरिक्षदेखि चन्द्रमासम्म उक्लिएको सिपले कोरोना रोकथामबारे केही भेउ पाएको छैन । यो जँघारबाट पार लाग्न घरमै गुँडुल्किनुबाहेकका उपायमा सिद्धहस्त चिकित्सक र वैज्ञानिक नै अहिलेसम्म अक्क न बक्क छन् । प्रविधि र विज्ञानमा उल्लेख्य सफलता हात पारिसकेका मुलुकहरू पनि जीवनशैली, खानपान, संस्कार आचरणमा ध्यान नदिँदा चुक्नुपरेको छ । किरा, फटयांग्रादेखि मुसा, सर्प भ्यागुतासम्मका भेटेजति जीवको भक्षण गर्नुलेपनि यस्ता रोगको आयातदर बढेको देखिन्छ । अहिलेको चोट र धक्काबाट मानिसले विगतको भूलसुधार गर्यो भने यो समय नयाँ विश्वव्यवस्थाको कोशेढुङ्गासमेत बन्ने देखिन्छ
खुसी र सन्तुष्टिको खोजीमा अनेकतिर भौतारिइरहँदा आफैभित्र रहेको आनन्दको अजस्र स्रोत भने ठम्याउन सकेनछौँ । सुखी भए पनि खुसीको कलाबारे हेक्का नै भएनछ । भौतिकवादी संसारका रहस्य खोदलखादल गर्दागर्दै आध्यात्मिक चेतनाको विराट संसारमा प्रवेश नै गरेनछौँ । त्यसैले त सबै भएर पनि केही नभएको बुङ्गोजस्तै भएछौँ ।
जीवनको आध्यात्मिक पाटो पहिल्याउन नसक्दा मानिस मानसिक चिन्ता, आत्मिक छट्पटी, नैराश्य, उद्विग्नताको पतन यात्रामा धकेलिएको छ । तसर्थ पाइला पाइलामा हारिरहेको जीवनले अब अर्को्तिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ । अध्यात्म र विज्ञानको समन्वयात्मक अभ्यास नै अहिलेको युगीन माग हो । यसबाट स्वर्णीम समयको पटाङ्गिनी छिटै उघ्रिनेछ ।
हामी नेपालीहरूका लागि पनि भविष्यका केही आशालाग्दा अवसर र सम्भावनापनि टुसाएका छन् । स्वदेशी भूमिमै पसिना, पुँजी र समयको लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवसरसमेत जुरेको छ । भोक मेटाउने भोजनका उत्पादनखानीहरू वर्षौँदेखि बाँझिएर जखरिएका छन् । झारपात उम्रेका पाखापखेरा, सुरक्यान तथा गराहरुलाई कुटो कोदालाले ठुँग्नेछन् र त्यहाँ हराभरा हुनेछ । चकमन्न बनेका उराँठलाग्दा बस्तीहरुमा फेरि नयाँ चहलपहल छाउनेछ । हरितन्नम बनेका स्वेदेशी उद्योगले नवजीवन पाई राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग धान्नेछन् । हजारौंको संख्यामा रहेका प्राकृतिक, तथा मानवीय सम्पदाहरू विश्वका पर्यटकको आकर्षणकेन्द्रमा विकास हुनेछन् । जलसम्पदाको विकासले आफ्नो विशाल वैभव प्रदर्शन गर्नेछ । विकासको स्वदेशी शैली तय हुनेछ ।
भाषा, संस्कृति, संस्कार, मानवतावाद अझ घनीभूत भएर मौलाउने छ । गुम्न लागेको मुलुकको मौलिक पहिचान, सांस्कृतिक धनराशी र सभ्यताको वैभव नवोदित हुनेछ । यो एउटा सम्भावना हो । त्यसको लागि अहिलेको नेतृत्वले वर्तमानका अभिभाराको बहन गर्ने कुशलता प्रदर्शन भने गर्नैपर्छ । तत्कालीन अवस्थामा भने धैर्य,संयम, सन्तुलन नगुमाई आफूलाई सुरक्षित गरौँ । अहिलेको खाली समय सकेसम्म सिर्जनात्मक र रचनात्मक कर्ममा लगाऔं । विश्वव्यापी बनेको कोरोनाको कहरबाट सबैले छिटोभन्दा छिटो उद्धार र त्राण पाइयोस् यहीँ कामना ।